Transcend သည် MacBook Pro အတွက် အထူး 1TB SD Card ကို ဖြန့်ချိသည်။ ငါ mac ကပါ။
Transcend သည် MacBook Pro အတွက် အထူး 1TB SD ကတ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Tony Cortes | 21/04/2022 18:59 | ပစ္စည်းများ
Mac အသစ်တစ်လုံးဝယ်တဲ့အခါ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်. သီအိုရီက အတတ်နိုင်ဆုံး လွယ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Mac ရဲ့ standard configuration မှာ ထပ်ထည့်နိုင်တဲ့ Giga တစ်ခုစီအတွက် Apple က သင့်အား ပေးဆောင်ရတဲ့ စျေးနှုန်းကို ကြည့်ပြီး ဘရိတ်ကိုက်တဲ့ ကောင်တစ်ကောင်ထက် သင့်နှာခေါင်းကို ရှုံ့လိုက်ပါတယ်။
Transcend သည် MacBook Pro အသုံးပြုသူများအတွက် ဤအကျပ်အတည်းအတွက် အဖြေကောင်းတစ်ခုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်- ၎င်း၏ SD မန်မိုရီကတ်အသစ် JetDrive Lite 330. မြန်ဆန်ပြီး 1TB ပမာဏအထိ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်အမှတ်တရများကို လူသိများသော ထုတ်လုပ်သူ လုပ်ဆောင်ရမှာတွေ 1-လက်မနှင့် 330လက်မ MacBook Pro မော်ဒယ်များအတွက် အထူး SD JetDrive Lite 14 မန်မိုရီကတ်များ၏ 16TB ဗားရှင်းကို ယနေ့ကြေငြာခဲ့ပြီး အဆိုပါ notebooks များကို အသုံးပြုသူများအား MacBook Pro ၏ အတွင်းပိုင်းသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် တတ်နိုင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ပေးဆောင်ပါသည်။
အထူးသဖြင့်၊ JetDrive Lite 330 ကတ်များသည် အရည်အသွေးမြင့် NAND flash memory ဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး ဖတ်ရှုခြင်းနှင့် စာရေးခြင်းအမြန်နှုန်းအထိ ပေးဆောင်သည်။ 95 MB / s နှင့် 75 MB / sအသီးသီး။ လက်ရှိ Apple MacBook Pros တွင် SD အပေါက်၏ streaming စွမ်းရည်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဤ JetDrive Lite တိုးချဲ့ကတ်များသည် ငါးနှစ်အကန့်အသတ်ရှိသော အာမခံချက်ပါရှိပြီး အဆင့်မြင့် chip-on-board (COB) နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ရေ၊ ဖုန်မှုန့်နှင့် ရှော့တိုက်ခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။ မော်ဒယ်များအပြင် MacBook Pro နှင့် 2021JetDrive Lite 330 သည် 13 လက်မ MacBook Pro (နှောင်းပိုင်း 2012-အစောပိုင်း 2015 မော်ဒယ်များ) နှင့်လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ရွေးချယ်မှု 1 တီဘီ Transcend ၏ လက်ရှိ JetDrive စွမ်းဆောင်ရည်များကို ဗားရှင်းအတွက် စတင်စျေးနှုန်း ယူရို 39,99 ဖြင့် စတင်သည်။ 64 GB ကို ကတ်အတွက် 213,96 ယူရိုအထိ 1 တီဘီ . ၎င်းတို့ကို Amazon သို့မဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်၏ သာမာန်ဖြန့်ဖြူးသူများတွင် သင်တွေ့နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » ပစ္စည်းများ » Transcend သည် MacBook Pro အတွက် အထူး 1TB SD ကတ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Apple သည် တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် မူတည်၍ ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုကို ငြီးငွေ့နေပြီး အရေးတကြီး အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်။
Brave browser သည် ယခုအခါ "အန္တရာယ်ရှိသော" စာမျက်နှာများကို Google AMP မှ တားဆီးထားပါသည်။